नेपालको दक्षिणी छिमेकी देशलाई भारत, इन्डिया, हिन्दूस्तान भनेर बुझ्ने गरिन्छ । एउटै देशको ३ थरि नाम कसरी रह्यो ?
भारतको नाम सम्बन्धी चाखलाग्दो इतिहास छ । प्राचीनकालमा महाराजा भरतले सम्पूर्ण भारतलाई विस्तार गरेका कारण उनको नामबाट ‘भारत’ रहन गएको बताइन्छ ।
मध्यकालमा तुर्क र ईरानीहरू भारत प्रवेश गर्दा सिन्धु घाटी भएर आए । उनीहरू ‘स’लाई ‘ह’ उच्चारण गर्थे, तसर्थ सिन्धु अपभ्रंश भएर हिन्दू रहन गएको भनाइ भारतमा रहेको छ । उनीहरूले त्यहाँका वासिन्दाहरूलाई ‘हिन्दू’ भनेर सम्बोधन गरे र हिन्दूको देशलाई ‘हिन्दुस्तान’ नाम दिइयो ।
सिन्धु नदीलाई ‘इन्डस’ नदी पनि भनिन्छ । सिन्धु नदीको किनारमा विकसित सभ्यतालाई सिन्धु घाटी सभ्यता भनिन्छ । भारत आउने विदेशीले सिन्धु नदीलाई ‘इन्डस’ नाम दिए । सिन्धु सभ्यताको कारण भारतको पुरानो नाम ‘सिन्धु’ पनि थियो, जसलाई ग्रीकमा इन्डो वा इन्डस पनि भनिन्थ्यो । यस शब्दलाई ल्याटिन भाषामा ‘इन्डिया’ भनिन्छ ।
जब ब्रिटिशहरू भारत आए, त्यसबेला भारतलाई हिन्दूस्तान भनिन्थ्यो । यद्यपि उनीहरूलाई हिन्दूस्तान भन्न समस्या भयो । त्यसपछि ब्रिटिश शासनको क्रममा ‘इन्डिया’ नाम प्रचलनमा आयो र विश्वभर धेरै प्रख्यात भयो ।
सन् १९४७, १४–१५ अगस्तको मध्यराति भारत स्वतन्त्र हुँदा संविधान र कानूनको निर्माण भइरहेको थियो । संविधान सभामा देशको नाममाथि प्रश्न उठ्दा थुप्रै विकल्पमा बहस भयो । जसमा भारत, हिन्दूस्तान, इन्डिया, हिन्द जस्ता विकल्पमा छलफल भयो ।
संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष डा. भीमराव अम्बेडकर देशको नाममा छिट्टै सहमति होस् भन्ने चाहन्थे । तर यसमा लामो बहस भयो ।
भारत उत्तरमा कश्मीरदेखि दक्षिणको कन्याकुमारीसम्म फैलिएको छ । संविधान सभामा प्रत्येक क्षेत्र र हरेक भाषाका मानिसहरू बसिरहेका थिए । हिन्दीलाई आधिकारिक भाषा मान्नेमा पहिले नै धेरै विवाद भएको थियो ।
यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १ मा लेखियो – इन्डिया अर्थात् भारत राज्यहरूको संघ हुनेछ ।
संविधानमा राष्ट्रिय गान र झण्डाको निर्णय भइसकेको थियो । देशमा ‘भारत माता की जय’को नारा लगाउने निर्णय गरियो । महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा देशलाई स्वतन्त्रता आन्दोलनमा एकसाथ ल्याउनका लागि भारतले ‘भारत माता की जय’ भन्ने गरेको थियो ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा
टेक्सासमा प्रहरीमाथि गोली प्रहार, २ प्रहरी अधिकृतको...
आफ्नै बोलीमा टिकेनन् ट्रम्प, कोरोना त्रासका कारण लगा...
इराकमा अमेरिकी सैन्य अड्डातर्फ गइरहेको बन्दोबस्तीको ...
मोदी सत्तामा हुँदा चीनले कसरी खाइदियो भारतको जमी...
कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश १ लाई ग्लोबल आइएमई बैंकको १० लाख सहयोग
राजस्व कार्यालय सार्न हतार गर्दा मासिक साढे ३ लाख आर्थिक भार, मन्त्रालय सार्न ढिलाइ
पहिरोको उच्च जोखिममा परेका ७३ घर सुरक्षित स्थानमा
हिजो दिनभर : हतारमा फुट्ने र फुर्सदमा पछुताउने अवस्था आउन नदिन लागिपरेकाे छु- प्रचण्ड, नेपालमा फेरि भित्रियो सलहको झुण्ड
तनहुँमा पहिरोमा परी किशोरीको मृत्यु, ५ जना बेपत्ता
नेपालमा पछिल्लो कोरोना संक्रमण दर २ प्रतिशत
असारमा ९६ अर्ब राजस्व